Kuzokuba noguquko komasipala e-E Cape | isiZulu
Kuzokuba noguquko komasipala e-E Cape
Kubanjwe amalungu e-ANC 'ayizipoki' e-E Cape
Ubuholi be-ANC e-E Cape buphika eyokulwa
I-ANC e-E Cape ikhankasela uZuma
Johannesburg - Amalungu eqembu elibusayo i-African National Congress komasipala base-Eastern Cape, angase athuthelwe kwezinye izindawo, kusho umbiko wangoMsombuluko.
UMngcinimafa weqembu uThandiswa Marawu, utshele iphephandaba iDispatch Online wathi kukhulunywe kwi-lekgotla, ebibanjelwe e-East London, kwanqunywa ukuthi kube khona amalungu azothuthela kwezinye izindawo.
"Ukuhanjiswa kwentuthtuko kuyaphazamiseka, hhayi ngenxa yokushoda kwezimali kodwa ngenxa yodweshu lwangaphakathi komasipala. Kumele kuthi kuphela inyanga kaMashi kube sekulungisiwe lokhu," kusho uMarawu.
UMarawu ubale uMasipala waseBuffalo City kanjalo neNelson Mandela njengezizinda ezidinga ukubhekisiswa, kwaba nguMasipala waseMnquma, iseButterworth, Mbashe, kube yiKing Sabata Dalindyebo kanjalo neMbizana esePort St Johns.
“Kwayimanje zikhona izincomo zokuthi kwenziwe uguquko. Kuzoshintshwa abasebenzi komasipala ekubukeka sengathi isimo angeke sisalungiseka neze kubo.
“Ngezinye izikhathi kuyenzeka abaphathi baphume baphele emigomweni yeqembu, kokunye kube izimeya. Kuzokuba khona uhlelo lokuqondiswa kwezigwegwe."